App-kii rasmiga ahaa ee NBA ee 2015 ayaa hadda la heli karaa | Wararka IPhone
Kuwa jecel kubbadda koleyga, sugitaanku wuxuu badanaa sii jirayaa weligiis illaa cayaartu bilaabmayso. NBA xilli, Laakiin nasiib wanaag caawo tawbadku wuu dhamaanayaa tartankii kubbadda koleyguna heer sare adduunka, tayo iyo daawade labadaba wuu bilaabmaa.
2 Lagu daray
Dhaqan ahaan, NBA waxay sifiican uga taxadartay faahfaahinta laxiriira codsigeeda, sanadkaanna uma muuqdo mid ka reeban. Sannadkan waxay diiradda saareen gaar ahaan - qaabka fiidiyowga, Markaa waxay umuuqataa inaan heleyno qadar farabadan oo warbaahin ah oo maalin walba na sugaya in nala daawado (laga bilaabo NBA waxay cadeeyeen in ka badan 50 fiidiyow oo cusub maalin kasta in loo soo saari doono ujeedkan).
Marka lagu daro inaan awoodno inaan hubino jadwalka ciyaarta, waxaan sidoo kale marin u helnay tirakoob faahfaahsan oo mid kasta oo ka mid ah iyo jadwalka rasmiga ah ee aaggeenna waqtiga. Intaa waxaa dheer, laga soo qaatay liiska xisbiga Waxaan uheli karnaa iibsashadeeda si aan uga daawano iphone-keena, inkasta oo ay run tahay inaadan iibsan karin hal ciyaar oo kaliya waana inaan dooranaa qaar ka mid ah xulashooyinka rukunka ee ay bixiso NBA (sanadle ama bille, wadar ahaan ama koox ahaan) .
Waxa intaa dheer in content multimedia iyo Ciyaaraha NBA wuxuu ku soo daray waxyaabo kale oo xiiso leh arjiga si aan uga faa iideysano inta ugu badan. Iyo in lagu muujiyo astaamahan dheeriga ah waa shaqada taariikhaha muhiimka ah, taas oo ah jadwal kaas oo lagu muujiyo dhammaan taariikhaha muhiimka ah ee xilli ciyaareedka si aynaan waxba u seegin oo aan qorsheynno horay u sii qorsheysanno.
Codsiga wuxuu leeyahay a nashqadeeyaan in ka badan inta la aqbali karo taasina waxay raacaysaa tilmaamaha ay dejisay Apple ee macruufka ugu dambeeyay, iyaga oo dooranaya midabbada midabka madow oo isaga si fiican ugu habboon ugana dhigaya mid raaxo leh in la xidho habeenkii. Heerka hawlgalka ma jiraan wax khaladaad ama gaabis ah oo lagu muujiyo.
Dabcan barnaamijka rasmiga ah ee NBA waa bilaash ah si aad u soo dejisoIn kasta oo, sidii aan hore uga faallaynay, dhammaan xulashooyinka suurtagalka ah ee daawashada cayaaraha tooska ah ay marayaan bixinta rukunka. Laakiin haddii aad ku dhiirrato League ama Team Pass iyo haddii kale, barnaamijku wuxuu muhiim u yahay dhammaan kuwa jecel horyaallada adduunka ugu fiican. Iskusoo wada duuboo, waxaa loo tarjumay Isbaanish qumman, wax had iyo jeer la qadariyo.
NBA App: Basketball Toosanfree
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Raac xilli ciyaareedka cusub ee NBA barnaamijka rasmiga ah
Toos u daawo Kufsadeyaasha Toronto iyo Miami Heat http://goo.gl/nwWqKV
Ku jawaab Roberto Romano
Apple waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku bixiso iTunes-ka shirkadeena